FAQs - NIutech Tontolo_iainana Co., Ltd
A: Afaka manome 10000T / Y, 20000T / Y, 30000T / Y sy lehibe kokoa fahaiza-manaony
A: Tsy misy asa ilaina nandritra ny famokarana, fa noho ny fanaraha-maso, maso sy ny fitaterana. Raha ny 10,000T / Y-dalana, dia mila ny asa 3-4 / fiovana
A: Tsy manantitrantitra ny manambatra ny theoretics sy ny fampiharana eo amin'ny fampandrosoana ny teknolojia. Manana asa nandritra ny taona maro azo ampiharina traikefa ny pyrolysis fototra ary nahita ka nanao ny fanavaozana sy fanovana mifanaraka amin'izany. Amin'ny Nandritra izany fotoana izany, ny ananantsika zavatra maro ara-barotra sy mpanjifa nihazakazaka foana 'zavamaniry any amin'ny firenena samy hafa.
A: Eny, afaka manome mpanjifa efa ananana ny fototra ho an'ny fitsidihana toerana.